SoundCloud - Music & Audio 2019.06.03-beta Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2019.06.03-beta လြန္ခဲ့ေသာ3လက
BRAND NEW: အပ်လုဒ်ဒါကို
- SoundCloud အပေါ်ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိမှု feature ကိုသင်တစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အရသာမှကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းမှအပ်လုဒ်တင်ပြီးအလတ်ဆတ်သစ်ကိုဂီတ, များစာရင်းကိုတတ်၏။
- နေ့စဉ်နေ့တိုင်း SoundCloud မှအပ်လုဒ်တင်ပြီးဂီတတစ်ခုအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ရောနှောမှုနှင့်အတူကျနော်တို့ကပိုမိုလွယ်ကူကအားလုံးကိုမှတဆင့်စီစစ်ရန် လုပ်. သင်သည်မေတ္တာတရားကိုမှခညျြနှောငျနေအပုဒ်ကိုရှာဖွေပါတယ်။
- အလွှတ်တင်ခြင်းသင်၏အကြိုက်များနှင့်ပြဇာတ်အပေါ်အခြေခံပြီးနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအပ်လုဒ်တင်ပြီးဂီတ, အကြံပြုဖို့စက်သင်ယူမှုအသုံးချ။
- ပိုငျသညျ SoundCloud ကိုသုံးပါက The လွှတ်တင်ခြင်းအတွက်အကြံပြုချက်များကို ပို. ပင်ဒဏ်ငွေ-ညှိသင့်ရဲ့အရသာမှဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သန်း 150 ပုဒ်နှင့်ကြီးထွားလာ - SoundCloud ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတနဲ့ audio streaming များပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်နှင့်ဂီတသမားတစ်ဦး Buzz အသိုင်းအဝိုင်းအဆက်မပြတ်အသစ်ကဂီတကိုအပ်လုတ်နှင့်အတူ, SoundCloud သင်တိုင်းအခါသမယများအတွက်ဇယား-topping အယ်လ်ဘမ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအစုံနှင့်ရောသမမွှေများနှင့်အတူလာမည့်ကြီးတွေအနုပညာရှင်ရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမား catalog ကိုသင်အံ့သြဖွယ်ဟစ်ဟော့, အီလက်ထရောနစ်, ကျောက်, ဂန္, jazz, podcasts နှင့်ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိပေးနိုင်ပါတယ်။
- ထွန်းသစ်စများနှင့်ထူထောင်အနုပညာရှင်တွေထဲကနေသန်း 120 ကျော်ပုဒ်
- All-အချိန် greats ကနေနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အပူဆုံးအပုဒ်ရန်, SoundCloud ဇယားနှင့်အတူအသီးအသီးအမျိုးအစားထဲမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂီတရှာဖွေရန်
- အလုပ်မလုပ်ဖို့လမ်းအပေါ်, ပါတီများ, လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ဖွင့်စာရင်းများကို Create, သို့မဟုတ်သင်ရောက်နေသမျှခံစားချက်
- Discover, စမ်းချောင်းနှင့်တေးဂီတကိုတစ်ဦးအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ရောနှော share - ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေး,
- သင်ဘယ်နေရာသွားသွား, သင်၏စုဆောင်းမှုအော့ဖ်လိုင်းကိုယူ
- ပံ့ပိုးမှုအနုပညာရှင်တွေ - SoundCloud Go ကိုကနေအားလုံးဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်းဟာပလက်ဖောင်းပေါ်ဖန်တီးသူမှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်
- အားလုံးရုံ $ 4.99 / လဘို့ *
- အဓိကတံဆိပ်များနှင့်အင်ဒီးကနေစူပါစတားအပါအဝင်သန်း 150 ကျော်ပုဒ်၏အပြည့်အဝတိုးချဲ့ catalog များအတွက် + Go မှ Upgrade
- အဘယ်သူမျှမကပိုအသက် 30 စက္ကန့်စမ်းကြည့်ရန် - ပရီမီယံ Go ကို + ပုဒ်အပါအဝင် SoundCloud ပေါ်မှာရှိသမျှဂီတ, stream & အော့ဖ်လိုင်းကယ်ဖို့လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်
- ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့, ထို့နောက် $ 9.99 / လ **
သင်တစ်ဦးဖန်တီးသူဖြစ်ပါသလား သငျသညျဂီတ, podcasts တွေကိုသို့မဟုတ်အသံမဆိုအမျိုးအစားစေနှင့် SoundCloud က upload တင်လိုက်လျှင်ဤ app ကိုသင့်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲနှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းညည်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသောလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး:
- သွားလာရင်းပေါ်တွင်သင်၏အပုဒ်အပေါ်မှတ်ချက် Reply
- သင့်အပုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင် stats Get
- နှစ်ဦးစလုံးလူသိရှင်ကြားနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်, သင့်အပ်လုဒ်တင်ပြီးအသံ Share
- ကို Google Play စတိုးအပေါ်ကအခမဲ့ရယူပါ: https://goo.gl/Hsz7f2
အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, စပိန်, ဂျာမန်, ဒတ်ခ်ျ, အီတလီနှင့်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီအတွက်ရရှိနိုင်။
* SoundCloud ပထမဦးဆုံး7ရက်များအတွက်အခမဲ့ သွား. , သောနော $ 4.99 / လ Get ။ ယခင်က SoundCloud Go ကိုစာရင်းမသွင်းကြသူအသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်အခမဲ့ 7-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေး။ စမ်းသပ်မှု၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်း7ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းရပါမည်သို့မဟုတ်အလိုအလြောကျ $ 4.99 / လအဘို့အပြည့်ကြလိမ့်မည်။ အမေရိကန်အခြေစိုက်အသုံးပြုသူများကန့်သတ်ငှေပါ။
** ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်း 30 အဘို့အ SoundCloud Go ကို + အခမဲ့ Get, ထိုနောကျမှ $ 9.99 / လ။ ယခင်က SoundCloud Go ကိုသို့မဟုတ် SoundCloud Go ကို + သို့ပေးသွင်းပြီးပြီမဟုတ်သူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်အခမဲ့ 30-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေး။ စမ်းသပ်မှု၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်း၏ 30 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းရပါမည်သို့မဟုတ်အလိုအလြောကျ $ 9.99 / လအဘို့အပြည့်ကြလိမ့်မည်။ အမေရိကန်အခြေစိုက်အသုံးပြုသူများကန့်သတ်ငှေပါ။
anoses စတိုး 5.56k 1.33M
APK ဗားရွင္း 2019.06.03-beta